ITAOSY : Zatovo miisa 15 namono mpirahalahy, namoy ny ainy ilay zokiny ary nalemy ilay zandriny
Faritra matetika itrangana tsy fandriam-pahalemana ao anatin’ny faritra Atsimondrano raha ny eny Itaosy sy ny manodidina. 13 septembre 2019
Ankoatra ny trangana fanendahana sy ireo fanafihana mitam-piadiana matetika miseho eny an-toerana dia nahazahoana loharanom-baovao ihany koa tato ho ato ny trangana herisetra tanterahin’ireo olon-dratsy. Araka ny tatitra voaray avy amin’ny zandarimariam-pirenena, dia mpirahalahy mpiray tampo no nisy namono tao anaty toeram-pisotroana iray ny alarobia lasa teo, tokony ho tamin’ny folo ora alina.
Vokany, maty tsy tra-drano ny iray raha toa ka malemy tsy afaka mitsangana intsony ny iray. Raha ny fanampim-panazavana dia lehilahy miisa 15 teo ho eo no tonga dia nifandrombaka namono ireo mpirahalahy ireo teo am-pisotroana zava-pisotro, izay tsy fantatra mazava ny tena antony. Raha ny filazan’ilay voavono tsy namony ny ainy dia tsy mahafantatra ireo olona namono azy ireo velively izy ireo no sady tsy nanana disadisa teny amin’ny manodidina. Avy nanamboatra moto simba izy mirahalahy no niditra toeram-pisotroana mba hanala havizanana, kinanjo daroka sy vono tsy fanta-piaviana no nahazo azy ireo. Ilay zokiny 40 taona no nindaosin’ny fahafatesana nohon’ ny ratra be nahazo azy, noezahina nentina teny amin’ny toeram-pitsaboana haingana taorian’ny tranga kanefa dia tsy avotra intsony. Namela manano tena iray, zanaka 7 sy 10 taona io lehilahy io. Ilay zandriny, manodidina ny 37 taona kosa dia malemy tanteraka ary mbola manohy ny fitsaboana.
Tafaporitsaka ireo nahavanon-doza
Rehefa avy namono ireto roa lahy ireto moa ireo tovolahy miisa 15 dia tafaporitsaka nitsoaka avokoa. Samy nisomebiseby rahateo koa ny teo amin’ny manodidina, hany ka nananosarotra ny fisamborana azy ireo. Tsy mbola hita hatreto ireo nahavanon-doza, mandeha ny fikarohana ary efa am-perinasa tanteraka ny eo anivon’ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao.
Raha ny tatitra nomen’ny zandriny mbola manohy mitsabo-tena dia misy tadidiny ihany ny endrik’ireo olona namono azy ireo. Arahina akaiky ny tohin’ny raharaha hatreto.